Indlela yokugqoka usana
Wonke umzali ukhathazekile ngokugqoka ingane. Emva kwakho konke, into efanele ukugqoka kanye ne-zapelenat baby isifuba - akuyona into elula, njengoba kungase kubonakale ekuqaleni, njengokugqoka ingane. Abazali abasha nabangenalwazi balwela konke amandla abo okugqoka ingane yabo, futhi lo mntwana usebenza kanzima futhi aphenduke lonke ithole ngenkathi ekhala ngokumemeza okukhulu. Akunakwenzeka ukumphoqa ukuba agqoke noma yini. Kancane kancane zonke izingubo zokugqoka abazali bobabili nengane ziphenduka ukuhlushwa kwangempela.
Kungani izingane zingathandi ukugqoka kanjalo? Yebo, ngoba ngaphambi kokuba azalwe, umntwana wachitha izinyanga ezingu-9 esiswini sikamama wakhe, lapho ayezungezwe khona kuphela yi-amniotic fluid kanye nezindonga zesisu. Lapho, ngaphakathi, ngezinye izikhathi wayengadlala ngentambo yomzimba noma aphuze umunwe wakhe. Lezi zinkinga ezithinta ingane zilinganiselwe. Ngemuva kokubeletha, iziqu zomsebenzi zihlanganisa zonke izikhumba zesikhumba, futhi lo msakazo omkhulu wezimpucuko wadala okusha, kuze kube manje engaziwayo, ngakho-ke hhayi ukuzwa okuthakazelisayo kakhulu.
Kusukela ngenhla kulandela ukuthi uma sigqugquzela umntwana, sishukumisa isikhumba sakhe sesikhumba esikhanyayo, futhi lokhu kuholela ekutheni isikhumba sithumela isimiso esimisweni sezinzwa zomphakathi, futhi ingane isondelene kakhulu. Futhi injabulo yengane ayiyona into enhle kakhulu, ngakho kungcono ukuthi ungayesabi.
Yingakho i-crumb yakho ethandekayo kufanele iguqulwe ngokushesha ngangokunokwenzeka, ucabange yonke into. Nazi imithetho embalwa ezosiza ukugqoka ingane ngokushesha futhi ngempumelelo.
1. Gwema lezo zembatho ezidinga ukugqoka phezu kwekhanda. Kungcono kakhulu ukusebenzisa ama-blouses kanye ne-bodikov ngomlomo omningi noma ngezinkinobho (izinkinobho) emahlombe. Elula kakhulu futhi "amadoda amancane", okuyizinkinobho noma izinyoka.
2. Ngaphambi kokuthenga izingubo zengane yakho, qiniseka ukuthi wenze yenziwe ngamakhiwe angokwemvelo, ungavimbeli ukunyakaza futhi ungenayo iminyango yangaphakathi embi. (Ngale ndlela, izingubo zokugqoka azigcini nje kuphela, futhi zivimbela ukuthuthukiswa kwengane.Nokuba umntwana oneminyaka engu-1-2 ubudala zonke izembatho kufanele zibe nezingxenyeni zangaphandle, ngoba isikhumba semvuthuluka sisesezingeni eliphansi).
3. Uma uvula i-crumb, ukumomotheka ngaso sonke isikhathi, ukumtshela ngothando amazwi, thinta izenzo zakho. Khumbula: isimo sengqondo somama sidluliselwa kalula kumntwana!
Ukugeza abantwana: Amathiphu
Isicelo sokuqala somntwana osanda kuzalwa
Kungani insana engatholi isisindo?
Ngingayidla kangaki usana?
Ukuthuthukiswa kwengane ezinyangeni zokuqala zokuphila
Iyini inzuzo yokudweba umntwana osanda kuzalwa?
Indlela yokukhetha ilungelo lokubhekwa kwezingane
Izindaba mayelana nothando nomfundisi
Ungabuyela kanjani indoda yakho ethandekayo?
I-apuladesi i-apula esikhwameni
Ukwelashwa kwe-hernia embilical kwengane
Imikhiqizo yokudla esetshenziselwa ukudla okunomsoco wezingane
Kate Hudson akanalo lutho lokufihla
Owesifazane ngamunye kufanele abe namadoda amahlanu
Ukuvuselelwa emva kokukhulelwa nokubeletha
Indlela yokufundisa ingane ukubhala ebhodweni?
Izipho Zonyaka Omusha 2015 Izimvu